Umsebenzi wokufudumala ukutshitshisa?
Umthombo wombane ophezulu wokusetyenziswa kwegesi usetyenziselwa ukuqhuba i-current current alternate ngokusebenzisa i-coil induction. Oku i-coil coil yaziwa ngokuba yilekhoyili yomsebenzi. Bona umfanekiso ojongene nawo.
Iphayibhile yangoku ngoku i-coil coil ivelisa intsimi ye-magnetic kakhulu kwaye iguquke ngokukhawuleza kwi-coil yomsebenzi. Umsebenzi wokutshiswa ubeka ngaphakathi kweli nqanaba elinamandla.
Kuxhomekeke kubume bezinto zokusebenza, izinto ezininzi ziyenzeka…
Intsimi ye-magnetic ehambayo yenza ukuba ukuhamba kwamanje kusebenze. Ilungiselelo lomsebenzi wekhoyili kunye nomsebenzi ocingwayo unokucingelwa njengenguqu yombane. Ikhoyili yomsebenzi injengokuqala apho amandla kagesi anikezelwa khona, kwaye umsebenzi ofana nomsebenzi wesibini ojikelezayo onokufutshane. Oku kubangela ukuba iipresenti ezinkulu zigqitywe ngomsebenzi. Ezi ziyaziwa ngokuba yimifudlana eddy.
Ukongezelela oku, i-frequency ephezulu esetyenziswe kuyo Ukutshisa ukunyuka Izicelo zivelisa into ebizwa ngokuba yimpembelelo yesikhumba. Esi siphumo senza isikhubekiso sokutshintshisa okwangoku kuhamba kumgca othobekileyo ophezulu kumsebenzi womsebenzi. Umzimba wesikhumba ukwandisa ukuchasana ngokuthe tye kwesinyithi ukuya kwinqanaba lekhoyo ngoku. Ngako oko kwandisa kakhulu umbane wokutshisa i- yokutyhubela kubangelwa ngoku kuqhutywe kwindlela yokusebenza.
[pdf-embedder url = "https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/08/induction_heating_principle-1.pdf" title = "induction_heating_principle"]
iindidi Teknoloji tags isiseko somsebenzi wokufudumala, lokutshisa, ukutshisa umgangatho wokupasa, ukuchithwa kwefuthe lokutshisa, ukufudumala kwamandla ombane Post yokukhangela
Umkhiqizi weeMveliso eziHlangayo
ukutyunjwa ukubethelela intonga yobhedu yokutshisa